Ahoana ny fametrahana sy fanalana ny rindranasa amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fametrahana sy fanesorana ny rindranasa amin'ny Mac
Pablo Aparicio | | Tutorials
Ity dia lahatsoratra iray hafa izay mikendry izay fantatra amin'ny hoe «Switcher», ireo mpampiasa izay miova amin'ny sehatra hafa ary, amin'ity tranga ity, dia nanapa-kevitra fa Mac ny sehatra vaovao. Raha misy mpampiasa tonga amin'ny OS X avy amin'ny Windows, ianao hahalala an'izany mametraka programa tsy maintsy manindry indroa amin'ny installer-nao ianao, fa ahoana kosa ny amin'ny Mac? Mitovy amin'ny an'ny Windows ve izany? Ny programa dia napetraka amin'ny alàlan'ny terminal? Soa ihany, ny safidy farany dia kely na tsy misy fampiasana amin'ny Mac.
Afaka mametraka rindranasa amin'ny Mac amin'ny fomba telo samy hafa izahay, fa ny rindranasa tsirairay dia mametraka amin'ny fomba iray. Midika izany fa rehefa misintona rindranasa iray isika dia tsy afaka mametraka azy io amin'ny fomba atolotry ny mpandrindra antsika fotsiny. Etsy ambany no nohazavainao ny fomba fametrahana ireo karazana fampiharana tsirairay, ary koa ny fomba tsara indrindra hanesorana azy nefa tsy mamela (saika) soritra rehetra.
1 Ahoana ny fametrahana apetraka amin'ny Mac
1.1 Avy amin'ny Mac App Store
1.2 Fampidinana installer
1.3 Hisintona ny azo ampiharina amin'ny folder Applications
2 Ahoana ny famafana ny apps amin'ny Mac
2.2 Mampiasa ny uninstaller anao
Ahoana ny fametrahana apetraka amin'ny Mac
Avy amin'ny Mac App Store
Efa taona maromaro izay no nanambanan'ny Apple App Store ho an'ny OS X. Ity fivarotana fampiharana ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Mac App Store ary amin'ny toerana misy anao dia ao amin'ny Dock raha vantany vao manomboka ny rafitra. Ny fametrahana fampiharana avy amin'ny Mac App Store dia tsotra toy ny fanarahana ireto dingana ireto:
Raha ny lojika, ny dingana voalohany amin'ity fomba ity dia ny hanokatra ny Mac App Store, noho izany dia tsindrio ny kisary ao amin'ny Dock. Raha nesorinay izy io dia afaka manokatra ny Mac App Store avy ao amin'ny Launchpad na amin'ny fitadiavana azy ao amin'ny folder Applications.
Manaraka izany, hanao fikarohana izahay avy amin'ny boaty izay ananantsika eo amin'ny ankavanana ambony. Soso-kevitra: azonao atao ny mikaroka amin'ny alàlan'ny fanitarana amin'ny alàlan'ny endrika ".Avi" (tafiditra ao anaty teny nalaina), manova ny "avi" mankany amin'ny fanitarana tadiavina isaky ny tranga.
Amin'ireo valiny azo, dia hisafidy izay hahaliana antsika indrindra izahay. Raha tsindrio ny iray amin'ireo valiny dia afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba ilay fampiharana izahay, ary koa mahita izay hampiasantsika ny vola (raha toa ka misy ny fividianana tafiditra).
Farany, tsindrio ny vidin'ny fampiharana raha toa ka voaloa na "Mahazo" raha maimaim-poana. Ny soratra bokotra dia hiova ho "Install App" ary hamafisinay ny fividianana na ny fisintomana anay amin'ny fipihana eo.
Miandry izahay ary, aorian'ny fisintomana sy fametrahana ny rindranasa, dia azontsika atao ny manokatra azy avy amin'ny fampirimana Applications, avy amin'ny Launchpad na mitady azy amin'ny Spotlight.
Ny zavatra akaiky indrindra amin'ny fametrahana programa Windows dia hita ao fampiharana izay misy mpampiditra. Ireo karazana fampiharana ireo dia mazàna somary sarotra kokoa noho ireo ho hitanao amin'ny teboka manaraka, saingy tsy izany foana no izy.
Mba hametrahana rindranasa izay misy ny mpampiditra azy ihany no mila ataontsika tsindrio indroa eo amboniny ary araho ny torolàlana tahaka ny ataontsika ao amin'ny Windows. Mandritra ny fizotrany dia afaka milaza aminao izahay hoe aiza no hametrahana azy, raha ho anay izany na ho an'ireo mpampiasa rehetra miditra amin'ny solosaina ary, angamba, toerana hafa. Ny zavatra mahazatra dia ny manaiky ny dingana rehetra, fa afaka milaza aminao izahay hoe aiza no hametrahana azy raha manana fizarazaran-dàlana maromaro na kapila mafy maromaro izahay.
Hisintona ny azo ampiharina amin'ny folder Applications
Ny zavatra ho hitantsika matetika dia ny fampiharana azo ampiharina. Ny rindranasa azo tanterahina dia toy ny programa iray izay tafiditra ao anaty fampirimana iray ihany, saingy ity fampirimana ity dia rakitra azo tanterahina izay handefa ny programa raha tsindrio indroa isika amin'ny sariny. Azontsika atao ny miditra amin'ireo rakitra ao anaty fonosana, saingy tsy soso-kevitra izany.
Ny fampiharana an'io karazana io dia azo alefa avy amin'ny lahatahiry misy azy, ka indraindray tsy ilaina ny mametraka azy. Fa aiza no hitahirizantsika azy? Ao amin'ny Mac dia misy ny Fampitaovana fampirimana ary izany no toerana tsara indrindra hitahirizana ireo karazana azo ampiharina ireo. Raha ny marina, ny fametrahana fampiharana toy izany amin'ny rafitra dia mametraka azy ao amin'ny folder Applications, tsotra toy izany.
Raha, na inona na inona antony, dia te hanana fampiharana voatahiry ivelan'ny folder Applications isika ary tsara kokoa raha tehirizina ao anatiny, rehefa tsindrio indroa ny kisary fampiharana hanokafana azy dia hampiseho hafatra iray izay hiteny zavatra iray isika toy ny «Ny fampiharana dia tsy ao anaty folder Applications. Mifindra? ". Amin'ireny tranga ireny dia tsara kokoa ny manaiky.
Ahoana ny famafana ny apps amin'ny Mac
OS X tsy toy ny windows. Ao amin'ny Mac, tsy dia misy firaketana firaketana firaketana betsaka na sisa tavela toy ny ao amin'ny rafitra fiasan'ny Microsoft, ka ny fanesorana ny rindrambaiko dia madio kokoa. Tsy ilaina koa ny mitady ny tontonana fanaraha-maso raha misy fizarana hanesorana ireo rindranasa, fa ataovy tsotra izao ireto dingana roa ireto mba hamongorana programa:
Tarihinay mankany amin'ny fako ny kisary fampiharana.
Manary ny fako isika.
Tsy voatery: avereno indray ny rafitra. Mety ho mora ampiasaina izy io rehefa mamafa ny rindrambaiko mifandraika amin'ny audio izay nametraka fanitarana sasany tamin'ny ora nametrahana azy.
Fa ny hoe madio fotsiny ny rafitra fandidiana dia tsy midika hoe tsy afaka miditra lalina amin'ny fahadiovany isika. Mampiasa fampiharana antsoina aho AppCleaner. Ny zavatra ataon'ny AppCleaner dia ny fikarohana ireo rakitra mifandraika amin'ny rindranasa iray ary mamafa azy ireo miaraka amin'ny fisie azo ampiasaina. Araka ny hitanao amin'ny pikantsary dia misy vitsivitsy ny rakitra fanampiny izay afaka mijanona ao anaty rafitra rehefa esorintsika ny rindranasa, fa maninona no tazonina izy ireo raha tsy mila azy ireo isika?
Raha miresaka momba ny AppCleaner aho fa tsy momba ny fampiharana hafa dia satria safidy io amin'ny fotoana anoratako ireo andalana ireo Maimaimpoana ary io dia iray amin'ireo izay mamafa ny ankamaroan'ny rakitra. Izy io dia manana safidy marani-tsaina mihitsy, izay raha misintona kisary mankamin'ny fako isika ary afaka mamafa ireo rakitra fanampiny, dia hisokatra izy io ary hanolotra antsika ny mety hamafana azy ireo. Matetika aho no milaza fa ilay uninstaller no hadinon'i Apple (fehezanteny iray nindramiko tamina rindrambaiko mitovy aminy -AppZapper-, saingy tsy maimaim-poana izany).
Mampiasa ny uninstaller anao
Toy izany koa fa hisy ny rindranasa izay manana installer-ny, misy koa ireo manana ny uninstaller anao manokana. Avy amin'ny fitsapana nataoko, ity safidy ity no azo antoka indrindra raha te-hamono rindrambaiko amin'ny Mac isika, saingy azontsika atao ihany koa ny mieritreritra fa ny fikasana dia ny hamela sisa tavela ao amin'ny rafitra noho ny antony sasany. Matoky ny tenako matetika aho ary mandraka androany dia mbola tsy nanana olana. Ho fanampin'izay, dia hahita uninstallers ho an'ny karazana rindrambaiko hafa isika, toa ny Adobe Flash Player izay mahazo tsikera be dia be ankehitriny.
Manana fanontaniana ve ianao sa manana sosokevitra tsara kokoa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fametrahana sy fanesorana ny rindranasa amin'ny Mac
Apple dia hamolavola ny Apple Car amin'ny toerana iray any Alemana
Ny mpandika teny Troga dia misy maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra